Engikufundile ku-CloudCamp | Martech Zone
NgoLwesine, Februwari 5, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Yize kubambezelekile (iviki eli-1) ngenxa yeqhwa ngesonto eledlule, I-CloudCamp Indianapolis uhambe ngaphandle kwesibibithwane kulobubusuku. Uma ukhona hhayi kusuka e-Indianapolis - kufanele uqhubeke ufunda. ICloudCamp intsha futhi ibanjelwe emadolobheni amakhulu emhlabeni wonke. Ngenxa yobungcitshi bendaba nobuholi bemboni ye BlueLock, senze umcimbi ophumelele khona lapha e-Indy.
Uma uzibuza ukuthi yini i-Cloud Computing, IBluelock inikeze izingxoxo ezithile zokuchaza leli gama elingenangqondo.
I-Cloud Computing e-Indianapolis?
I-Indianapolis ithola ukunakwa kuzwelonke nakwamanye amazwe ngenxa yezindleko eziphansi, ezizinzile ezihambisana namandla nempahla - izinto ezimbili ezinkulu ekunqumeni izindleko zokubamba. Ngokwengeziwe, isimo sezulu sethu siqinile futhi siyimpambana-mgwaqo emigogodleni emikhulu ye-Intanethi eNyakatho Melika. Uma ubamba uhlelo lwakho lokusebenza endaweni yokugcina idatha yaseCalifornia njengamanje - ungahle uthande ukubheka!
IBlueLock ingumHoli wamazwe omhlaba ku-Cloud Computing
Kufanele ngibe neqiniso, lapho ngizwa uPat O'Day ekhuluma, ngesaba kakhulu ukuthi lowo mfana wazi kangakanani nge-computing yamafu, i-utility computing, i-grid computing, ukuphathwa kwedatha yedatha, i-Virtualization, i-VMWare… uyayibiza futhi lowo mfana uyazi it. Ukhulume kahle, unomusa, futhi unamandla angaqondakaliyo okukhuluma nathi bantu abangebona ubuchwepheshe kulo mkhakha!
Angibaphunguli abanye eqenjini! UJohn Qualls noBrian Wolff bangabangani abakhulu kepha kulobubusuku uPat ubesendaweni ephambili.
Phuma Izikhathi: Ukwehluka kohlelo lokusebenza
Esinye sezikhathi engibe khona bekuholwa ngu-Ed Saipetch. U-Ed wasebenza eThe Indianapolis Star ngenkathi ngenza futhi wakha ukushuba okuningi kanye nokusetshenziswa kwephephandaba. Wakhipha umlingo ngaleso sikhathi - wayenezinsizakusebenza ezincane kanye nezidingo eziningi zokwakha izicelo zebhizinisi kuzabelomali ezincanyana.
U-Ed wabelane ngetoni ngamathuluzi amasha angasetshenziswa ekuhloleni umthwalo okuzenzakalelayo nokuhlolwa kwesivinini sohlelo lokusebenza kanye nengxoxo enempilo yokwakhiwa kwezakhiwo nokuthi kusho ukuthini ngokukhula zibheke phezulu futhi zikhule zibheke phezulu. Ngiyijabulele kakhulu ingxoxo.
Ukwehliswa empeleni kuyigama lobuchwepheshe?
[Faka uBeavis noButthead bayahleka]
Saze saxoxa kuthuka, igama engangiligcinele amahlaya okugeza kuphela engawabona ku-movie kanye. Kuthuka empeleni kuyindlela yokukala uhlelo lwakho lokusebenza, kunalokho ngesihluku, ngokumane wenze amakhophi wedatha amasha futhi ucindezele amakhasimende emininingwaneni ehlukene ukwehlisa ubuhlungu bokushaya i-database eyodwa ngaso sonke isikhathi.
Izindleko ezihambisana nekhompiyutha yamafu zingahluka kakhulu - kusuka kokungenalutho kuye kumasistimu aqashwe kakhulu futhi avikeleke kakhulu. Ukunambitheka kukaBlueLock Ingqalasizinda Njengesevisi - lapho ungakhipha khona wonke amakhanda weNgqalasizinda eqenjini labo ukuze ukwazi ukugxila ekusetshenzisweni nasekukhuleni!
Ngingene engxoxweni ye-Return on Investment ngicabanga ukuthi sizoba nesifundo esinamandla kakhulu ekuhlaziyweni kwezinsizakusebenza ezidingekayo ekusingatheni kwendabuko kuqhathaniswa nefu. Esikhundleni salokho, URobby Slaughter iholele engxoxweni evelele ngobuhle nobubi babo bobabili futhi yakhuluma ngokuncishiswa kwengozi.
Ubungozi yinombolo izinkampani eziningi ezingabeka izinombolo ezithile kuyo… izobiza malini uma ungakwazi ukukhula ngokushesha? Kuzobiza malini uma wehla futhi udinga ukuletha imvelo ebuyisiwe? Lezi zindleko, noma imali elahlekile, ingagubuzela ama-nickel nama-dimes ahlaziywe ngokuqhathanisa kwendabuko.
Sibonga ngokukhethekile ku-BlueLock ngomcimbi obanjwe ngokumangalisayo (i-pun ihloselwe). Ngangikulinda ukubuyela ekhaya futhi ngibhulogi mayelana ne-sharding.
"Saze saxoxa nangokusharder, igama engangiligcinele amahlaya okugeza kuphela engake ngawabona ebhayisikobho."
Ngihleke kakhulu, ngazigaxa kancane.
Futhi, [Faka uBeavis noButthead bayahleka]
Siyabonga nge-plug, uDoug! I-Cloudcamp ibingumcimbi omuhle.
Bengingekho enkulumweni ka-Ed mayelana nokucheba, kepha bengicabanga ukuthi ngizocacisa ukuthi le ndlela akuyona "eyokwenzelela." Imvamisa, ukushwabanisa kubhekisa ekuphuleni i-database yakho ngokuhlukaniswa nolayini bephutha bohlelo lokusebenza. Isibonelo, uma idatha evela kwikhasimende elilodwa ingalokothi ithinte idatha evela kwelinye ikhasimende, ungahlukanisa imininingwane yakho emikhulu ibe izingxenye ezimbili: i-AL ne-MZ.
Ukugcina abafana (njengo-Ed) lolu uhlobo lwesixazululo esingahluziwe, ngoba kusho ukuthi kufanele ugcine imininingwane eminingi ehlelwe ngendlela efanayo. Kepha kuyindlela enhle yokwandisa ukusebenza ngaphandle kokungeza izindleko eziningi!
I-Crude kungaba yigama elingcono, uRobby. Ukucaciswa okuhle - kuyisixazululo esisebenzayo, okuncane nje kwamandla amakhulu.
"Brute force" uqinisile. Kepha uyasazi isisho esidala esithi: “Uma amandla angenangqondo engasebenzi, mhlawumbe awusebenzisi ngokwanele!”